Sa’uudiin June 21/2020 booda uggura sochii ummataa irra kaahamee ture kaasuuf karoorfatte - NuuralHudaa
Mootummaan Sa’uudii weerara vaayirasii koroonaa to’achuuf uggura sochii ummataa irra kaahee ture, xumura torbee kanaa irraa eegalee laaffisuun ji’a dhuftu keessa guututti kaasuuf kan karoorfate tahuu beeksise.
Miidiyaaleen biyyattii akka gabasanitti, adeemsi uggura sochii ummataa irra kaahamee ture kaasuudhaa kun gulantaan kan raawwatamu yoo tahu, jalqaba sochiin ummataa sa’aa 24 guutuu ugguramee ture kan hir’atu tahuu ibsame. Haaluma kanaan Khamiisa irraa jalqabee sochiin ummata kan ugguramu yeroo sa’aa 3pm-6am keessatti qofa tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Dabalataanis May 31/2020 booda Masaajidoonni Salaataaf ni banamu; Waajjiraalee fi iddooleen hojii mootummaa fi dhuunfaatis ummata keessummeessuu akka jalqaban murtaahee jira.
Haata’u malee magaalaa Makkaa keessatti ammas uggurri sochii ummataa irra kaahame hanga June 21/2020 tti kan itti fufu akka taheefi, June 21 booda haalli jiru qoratamee sa’aa sochiin ummataa itti ugguramu kan gaababatu akka taheefi Masaajidoonni ummataaf kan banaman tahuu ibsame.
Gama biraatiin ammoo Mootummaan Sa’uudii Sirna Hajjii bara kanaa fi Umraa ilaalchisee ammas murtii irra kan hin gahin tahuu ibse.
Biyyattii keessatti hanga guyyaa har’aatti namoota 74,795 vaayirasichaan qabaman jidduu 399 du’uu gabaafame.
September 22, 2021 sa;aa 4:44 am Update tahe